Egosiputa taata O buru na odi gi ka ichoro ka Jisos “Rue ala” di gi gburugburu Ahụrụ m Jizọs n'anya
Chee echiche banyere taa ma ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa ikwe ka Jizọs "kọọ ala" gị
di Paolo Tescione - Ọktoba 24, 2020
“‘ Kemgbe afọ atọ, m nọ na-achọ mkpụrụ n’osisi fig a, ma ọ dịghị nke m hụrụ. Ya mere were ya. Gịnị mere ọ ga-eji gwụchaa n’ala? Ọ zara ya, sị: “Onyenwe anyị, hapụkwa ya maka afọ a kwa, m ga-akọkwa ala gburugburu ya, takụọ ya; ọ nwere ike ịmị mkpụrụ n'ọdịnihu. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike iweda ya ''. Luk 13: 7-9
Nke a bụ onyonyo gosipụtara mkpụrụ obi anyị ọtụtụ oge. Ọtụtụ oge na ndụ anyị nwere ike ịdaba na mmekọrịta anyị na Chineke na ndị ọzọ nọ na nsogbu. N’ihi ya, ndụ anyị amịghị ezigbo mkpụrụ.
Ikekwe nke a abụghị gị n'oge a, mana ma eleghị anya ọ bụ. Ma eleghị anya, ndụ gị gbanyesiri mkpọrọgwụ ike na Kraịst ma ọ bụ ikekwe ị na-agba mgba nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị na-agba mgba, gbalịa ịhụ onwe gị dị ka nke a oyi. Ọ na-agba mbọ ịhụ onye na-agba mbọ 'ịkọ ala ma mee ka ọ baa nri' dị ka Jizọs n'onwe ya.
Ọ dị mkpa ịmara na Jizọs adịghị ele fig a anya, ọ tụpụghịkwa ya dị ka ihe na-abaghị uru. Ọ bụ Chineke nke nwere ohere nke abụọ ma kpebisie ike ilekọta osisi fig a n'ụzọ ga-enye ya ohere ọ bụla dị mkpa ịmị mkpụrụ. Otú ahụ ka ọ dịkwa anyị. Jisos atapughi anyi, n’agbanyeghi uzo anyi kpafuru. Ọ dị njikere oge niile ma dị njikere ịbịakwute anyị n'ụzọ anyị chọrọ ka ndụ anyị wee nwee ike ịmị ọtụtụ mkpụrụ.
Na-egosi taa ma ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa ikwe ka Jizọs "kọọ ala" gị. Atula egwu ikwe ka O nye gi nri nke ichoro iji weta otutu ezi nkpuru na ndu gi.
Onyenweanyị, amam na achọpụtara m ịhụnanya gị na nlekọta gị oge niile na ndụ m. Achọrọ m ịzụlite gị ka m nwee ike ịmị mkpụrụ ị chọrọ n'aka m. Nyere m aka imeghe ụzọ ndị ịchọrọ ịzụlite mkpụrụ obi m ka m wee mezuo ihe ọ bụla ị bu n'uche maka m. Jesus ekwere m na gị.
Obi ekele: mmegharị ahụ na-agbanwe ndụ
Ntụgharị uche nke ụbọchị: ike ịgbanwe nke ibu ọnụ